प्रधानमन्त्रीको आक्रोश- मेराविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याऊ न, राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग किन ? (भिडियो) – Nepal Press
प्रधानमन्त्रीको आक्रोश- मेराविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याऊ न, राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग किन ? (भिडियो)
२०७८ जेठ ७ गते १३:४१
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने कुरा विपक्षीले गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
शुक्रबार बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रियामा ओलीले भने, ‘कोही राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेको छ । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने आक्रोश, कुन्ठा अथवा के हो यो ? राष्ट्रपतिलाई हामीले संविधानमा के अधिकार दिएका छौं ? प्रधामन्त्रीमाथि ल्याऊ न अविश्वास । बहुमत ल्याऊ । सरकार बनाऊ भनेकै छ त ।’
प्रधानमन्त्रीले गर्ने सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सदर गर्ने भन्दै राष्ट्रपतिमाथिको आक्रोश गणतन्त्रविरुद्धको खेल भएको समेत आरोप लगाए । ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिस जे राष्ट्रपति कहाँ जान्छ, त्यो राष्ट्रपतिले सदर गर्ने हो । अनि राष्ट्रपतिमाथिको आक्रोश किन ? यो गणतन्त्रविरुद्धको खेल हो । गणतन्त्रको प्रतिक हो राष्ट्रपति ।’
सिफारिस गर्ने काम आफूले गरेको भन्दै त्यसप्रति जवाफदेही पनि आफू नै भएको बताएका छन् । ‘आफ्नो पार्टीको भएन भन्दैमा राष्ट्रपतिको हुर्मत लिने, अपमान गर्ने ? सिफारिस मैले गरेको हो । मैले गरेको काम प्रति म जवाफदेही हुन्छु।’
प्रकाशित: २०७८ जेठ ७ गते १३:४१